#AfricansInUkraine (AfrikànaAoOkraina): Mpianatra izahay, tsy manana fitaovam-piadiana · Global Voices teny Malagasy
Afrikàna mpianatra, mampiasa tambajotra sôsialy hilazàna ny misy azy ireo
Voadika ny 15 Marsa 2022 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, عربي, українська, English
Tranobe ao Kiev (Arabe Oleksandr Koshyts) taorian'ny daroka baomba nandritra ny fananiham-bohitra rosiàna tao Okraina. Sary Wikimedia an'ny Filankevitry ny Tanànan'i Kiev, 26 Febroary 2022 (CC BY 4.0)
Ny 24 Febroary, rehefa notafihan‘i Rosia i Okraina, an'aliny maro ireo mponina nandao ny tranony hikatsaka fialofana azo antoka any ambadiky ny sisintanin'ity firenena ao Eorôpa Atsinanana ity. Nofoanana ireo sidina sivily nampifandray an'i Okraina tamin'izao tontolo izao, an-tanety no tsy maintsy nandehanan'ny olona, toy ny fiarandalamby, fiara be iraisana sy fiara tsotra. Isan'ireo sivily nandositra koa ireo Afrikàna am-pielezana, izay tsy maintsy niatrika ny tsy fisian'ny tohana ôfisialy avy amin'ny firenena niaviany, sy ny fanavakavahana ara-poko eny an-kianja ao Okraina ary eny amin'ireo toerana fisavàna eny an-tsisintany.
Nankalazaina be teny anaty tambajotra sôsialy ny herimpo sy ny faharetan'ireo Okrainiàna miaro ny tanindrazany, toy ireo miaramila okrainiàna niteny tamin'ireo sambo mpiady rosiàna hoe “ndeha mandeha-T.. any”, na ilay ramatoa okraniàna nanome voam-boninkazo tanamasoandro an'ireo miaramila rosiàna, mba “haniry ireo tanamasoandro rehefa maty izy ireo,” na ny filoha okraniàna nandà ny tolotry ny Amerikàna hanalàna azy ao.
Kanefa, tsy mbola ilay sary feno sy tanteraka amin'izay toedraharaha misy ao Okraina io. Zavatra iainany momba ny fanavakavahana ary mbola sarobahana kokoa no ambaran'ireo Afrikàna maneho hevitra ao amin'ny tambajotra sôsialy .
16.000 ireo Afrikàna mpianatra ao Okraina
Okraina, miaraka amin'ireo anjerimanontolo mihoatra ny 240 ananany sy ireo mpianatra iraisampirenena mihoatra ny 76.500, no fitodiana iray malaza ho an'ireo mpianatra avy amin'ny firenena Tatsimo toa an'i India sy ireo firenena afrikàna. Myroslava Hladchenko, ramatoa mpikaroka ao amin'ny Anjerimanontolo Nicolaus Copernicus, Pôlônina, no manazava fa mba ho entina manohy fianarana ambony dia mahazo fankatoavana tsara ny diplaoma iray avy amina anjerimanontolo okrainiàna iray, nefa tsy sarotra loatra ny fomba fidirana no sady ambany noho ny an'ireo firenena hafa ao Eorôpa ny saram-pianarana sy ny halafon'ny fiainana.
Misy 16.000 ireo Afrikàna mpianatra ao Okraina. Anatin'izy ireny dia ireo Maraokàna mpianatra no mandrafitra ny vondrona lehibe indrindra misy 8.000, manodidina ny 4.000 ireo Nizeriàna ary 3.500 ireo Egiptiàna, hoy ny tatitry ny Deutsche Welle. Raha nampitandrina ireo mpianatra avy any aminy i Egypta sy Maraoka mba handao an'i Okraina mialoha ilay fananihambohitra, navela handeha amin'ny herin'ny tenany kosa ireo mpianatra avy amin'ireo firenana afrikàna hafa.
Araka ny lazain'ny World University News, tamin'ny 24 Febroary “ny Fianarana ao Okraina”, loharanom-baovaon'ny governemanta okrainiàna ho an'ireo mpianatra iraisampirenena, dia nanoro hevitra azy ireo mba hanaraka ny vaovao, hifandray tsy tapaka amin'ny anjerimanontolo ianarany ary hanao ho laharam-pahamehana ny fiarovana ny ain-dry zareo.
Ny 26 Febroary, “The East African”, gazety iray miorina ao Kenya, raha nitatitra ny fihetsik'ireo firenena afrikàna tatsinànana — Ogandà sy Tanzania — dia nandrisika ihany koa ny mpianatra mba “hanaraka ireo torolàlana omen'ny manampahefana ao an-toerana sy hanara-maso ny toedraharaha eny anatin'ireo fantsom-baovao.” Fanambaràna iray (tsy misy daty) avy amin'ny masoivoho tanzaniàna ao Stockholm sy Berlin no niparitaka tao amin'ny media sôsialy ny 28 Febroary, nasiana adiresy WhatsApp ho an'ireo Tanzaniàna mpianatra mila fanampiana.
Ny 24 Febroary, nanambara ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany ao Nizerià hoe efa misy drafitra napetraka hamoahana ireo Nizeriàna mpianatra, tamin'ny andro nanakatonan'i Okraina ny habakabak'izy ireo indrindra. Kanefa, ny 26 Febroary, ny masoivohon'i Nizerià ao Pôlônina dia nibitsika fa misy diplaomaty iray hiandry ireo Nizeriàna mpianatra hiampita avy ao Okraina ho any Pôlônina.
Ny 26 Febroary, nilaza ny governemantan'i Sierra Leone, araka ny bitsika iray nalefan'ny gazety Newswatch any an-toerana fa tsy misy ahiana ireo Sierra Leoniàna 97 ao Okraina. Nangataka an'ireo firenena eorôpeàna mpifanolo-bodirindrina, toa an'i Hôngria, ihany koa ny governenamantan'ity firenena afrikàna tandrefana ity mba handray ireo mpianatra tonga hiampita ny sisintany.
Fanetsehana ny fanampiana tsy araka ny lalàna
Na izay aza, anatina krizy iray izay andosiran'ny olona rehetra ho any amina toerana iray azo antoka kokoa any ambadiky ny sisintany, miasa eo ambany tsindry ireo manampahefana any an-toerana, ary lasa tena saro-bahana ny toedraharaha eny an-kianja. Noho ny tsy fisian'ny torolàlana tena azo tsapain-tànana avy amin'ireo governemanta sy masoivoho afrikàna momba ny fomba hamoahana am-pitoniana, dia ny olona mihitsy no niditra media sôsialy mba hifandamina sy hitatitra ny momba azy.
Tao amin'ny Twitter, WhatsApp, Telegram, ary anatin'ireo vondrona manokana arakaraky ny tanàna ipetrahany ao Okraina, na ireo vondrona hafa anaty tambajotra manohana ireo olona mandositra an'i Okraina, toy ny Host a Sister (Mampiantranoa anabavy/rahavavy iray), Africans in and outside Ukraine (Afrikàna anatiny sy ivelan'io Okraina), nanomboka ny fandrindràna teo amin'ireo olona mila fanampiana sy ireo olona afaka manome fanampiana. Ohatra, ilay Zimbaboeàna mpianatra, Koko, tao Dnipro any Okraina, dia nikarakara ezaka iraisana tamin'ny alàlan'ny sehatry ny media sôsialy. Nangataka fanampiana izy ho an'ireo Afrikàna mpianatra nila fanampiana, namorona vondrona WhatsApp, nizara maodelina taratasy fanoratana ho an'ny masoivoho, ary torohay tena ilaina rehefa anaty fotoanan'ny krizy.
Nentanina ireo Afrikàna mba hivondrona rehefa handeha hamonjy sisintany. Marobe ireo nitatitra olana momba ny fahazoana vola, ny fisafidianana fitaterana ary ny fiakaran'ny sarandàlana. Ny tsy fisian'ny fampitambaovao mazava avy amin'ireo firenena niaviany dia mety vao mainka hanasarotra ireo olana momba ny fifidramonina rehefa hiampita ny sisintany.
Miharihary fa sarotra kokoa ny toedraharaha eny an-kianja ho an'ireo Afrikàna mpianatra, izay nitatitra ny fiatrehan-dry zareo ny fanavakavahana ara-poko.
Ao anatin'ity bitsika ity, asehon'ny lahatsary iray ireo manampahefana Okrainiàna manakana ireo Afrikàna mpianatra tsy hiditra ny toby iray fandraisana fiarandalamby ho any amin'ny sisintany. Bitsika iray hafa amin'io fahana Twitter etsy ambony io ihany no milaza hoe “tafahitsoka ao amin'ny toby fandraisnaa fiarandalamby ireo Afrikàna, taorian'ny nanakanana an-dry zareo tsy handray fiarandalamby hamonjy toerana azo antoka (any Pôlônina), fa mbola notànana miaraka amin'ireo okraniàna ry zareo #racism #Ukraine #ukraineracism.”
Avy ao amin'ny kaonty Instagram an'i Bernice Fernande isika no manaraka ny diany sy ilay Tanzaniàna nàmany Nenyo, naharitra 24 ora niainga tao Kharkiv hankany Lviv, toerana nampiantranoana azy ireo nandritra ny alina tao amina fiangonana iray, talohan'ny nanomanany ny fiampitàn'izy ireo ho any Pôlônina.
Ireo Zimbaboeàna mpianatra no nizara ny zavatra niainan-dry zareo ny “fanilikilihana sy ny fanavakavahana” teny amin'ireo toerana fisavàna eny an-tsisintany tao Romania. Teo amin'ny sisintany hidirana an'i Pôlônina, notaterin'ny Nizeriàna iray mpianatra fa “sakanan'ireo mpiandry sisintany izay olona mainty hoditra ary alefan-dry zareo miverina any amin'ny faran'ny laharana, amin'ny filàzana amin'izy ireo fa tsy maintsy ireo ‘Okrainiàna’ aloha no alefa voalohany.”
Nze, Nizeriàna, nibitsika avy eny amin'ny sisintany mankao Pôlônina:
ZZZZZ Efa ho tapakandro aho no nandeha an-tongotra hamonjy ny sisintany ary dia tsy maintsy mbola ho toy ny tay ihany koa no iheverana ahy eto. Avy hatrany, taorian'ny nialàn'ireo olon'ny media nilanja ny fakantsarin-dry zareo, nanomboka nanosintosika anay Afrikàna ry zareo, mba handeha any amin'ny faran'ny laharana, sanatria toy ny hoe katsentsitra tokony hoesorina izahay.
“Mpianatra izahay, tsy manana fitaovam-piadiana,” no naverimberina noventesin’io vondrona Afrikàna mpianatra io teo amin'ilay toerana fisavàna eo an-tsisintany iraisana amin'i Pôlônina, nanandratra ambony ny tànan-dry zareo. Tsy nilanja basy izy ireo fa ny telefaona findainy.
Nohamafisin'ireo tatitry ny media ny filazan'ireo Afrikàna mpianatra ny sedra mafy manjo azy ireo ao Okraina.
The Globe and Mail sy ny Irish Times dia samy nanaraka akaiky ireo tatitra tanaty media sôsialy ary nitafa tamin'ireo Afrikàna niaina fanavakavahana ara-poko. Ny lehiben'ny diplaomasia ao Afrika Atsimo, Clayton Monyela, dia manamafy ny fomba fitondra feno fanavakavahana atao an'ireo Afrikàna eny amin'ireo sisintany pôlôney sy hôngroà.
Raha toa azo helohina ny fananihambohitra ataon'i Rosia ao Okraina, dia tsy ambaka an'izany ny fanavakavahana ara-poko manjo ireo Afrikàna mpianatra sy ny hafa. Maneho tsara ny tena marina mifanohitra amin'io zavamisy mampalahelo io ny bitsika manàla azy nalefan'ilay Nizeriàna mpanoratra tantara, Elnathan John: “Hajaiko ny resaka foko. Fa na dia anaty ady iray aza, mbola vitanareo ny hanana angovo entina hanavahana, mifototra amin'ny resaka foko Hajaiko izay fatrana fandavantena izay. Izany no haavon'ny asa manaraka fitsipika katsahiko. Fitahiana ho anareo.”
Raha mitady misimisy kokoa momba ity lohahevitra ity, tsidiho ny pejinay manokana natokana ho an'ny Rosia manani-bohitra ao Okraina [Angl].